Doorashadda Guddoomiyaha Barlamaanka Galmudug oo dib u dhacday – Radio Daljir
Doorashadda Guddoomiyaha Barlamaanka Galmudug oo dib u dhacday
Seteembar 25, 2018 4:39 g 0
Sida uu qorshaha ahaa maanta ayaa la filayay inay qabsoonto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug, kadib markii lagu cadeeyay jadwal guddigu ay horey u soo saareen, balse dib u dhac ayaa ku yimid.
Guddiga oo markale maanta kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay soo saareen jadwalka cusub oo la xiriira doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug.
Guddiga ayaa waxa ay tilmaameen jadwalkii hore inuu ku yimid hakad kaas oo ahaa guddigii ka socday aqalka sare oo xog uruurinta khilaafka ka dhaxeeya DFS iyo Galmudug u tagay magaalada Dhuusamareeb iyo in aysan musharaxiinta heysan waqti ku filan, maadaama waqtigii hore uu koobnaa.
Guddiga ayaa jadwalkooda cusub ku shaaciyay qabashada codsiyada musharaxiinta inay bilaabatay 25-ka September oo maanta ku beegan, kuna egtahay 01-da October.
Guddoomiyaha guddiga doorashada baarlamaanka Galmudug Xildhibaan Sayid Maxamed Xaashi ayaa wuxuu sheegay in musharaxiinta ay khudbadahooda jeedin doonaan 02-da bisha October, iyada oo ugu dambeyn doorashada la qaban doono 03-da October oo ku beegan maalin Arbaco ah.
Wasiirka Wasaradda Arrimaha Gudaha oo shir ka daahfuray Muqdisho (dhegayso)
Isbaddalka Geeska oo gaaray Hargeysa iyo Qalbidhagax oo la soo dhaweeyey (dhegayso)